Iibso talooyinka cidiyaha been abuurka ah ee la go'i karo WoopShop®
Dhererka ciddiyaha: isku dhafan
Tirada: 24pcs / set
Lambarka Moodalka: F73412
Baaxadda ciddiyaha: isku dhafan
Astaamaha: Cidiyaha Beenta Acrylic, Ciddiyaha Been -abuurka ah ee la kala saari karo, Talooyinka Ciddiyaha Beenta ah ee la kala qaadi karo, musmaarro been abuur ah oo leh xabagta saxaafadda
Waxyaabaha Shayga: ABS
Ku habboon in lagu isticmaalo gel, akril, ama fiberglass.
jecel iyaga... waxay ku yimaadeen 3 toddobaad
Ciddiyaha ayaa u muuqda kuwo wanaagsan, waxaa jira koolo. Waxaan qaatay 5 midab. Wali iskuma dayin Bixinta Degdegga ah 2 toddobaad.
Ciddiyaha ayaa qurux badan
Runtii in ka badan intii aan filayay laakiin aad bay u qurux badan yihiin!!